३३ वर्षदेखि चिया मात्रै पिएर जीवन कटाउँदै यी महिला ! – ramechhapkhabar.com
३३ वर्षदेखि चिया मात्रै पिएर जीवन कटाउँदै यी महिला !
चियासँग हाम्रो देशमा अधिकांश मानिसको गहिरो सम्बन्ध छ । बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म १० कपसम्म चिया पिउँछन् । यसैबीच एक महिला ३३ वर्ष यता चिया मात्रै पिएर जीवन बिताइरहेकी छन् ।
त्यसैले उनको नाम नै ‘चायवाली चाची’ बनेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार कोरिया जिल्लाको बैकण्ठपुर विकासखण्डको बरदिया गाउँकी यी महिलाको नाम पल्ली देवी हो । उनको अवस्था देखेर डाक्टर पनि हैरान बनेका छन् । ४४ वर्षीया पल्ली देवीका पिता ६ कक्षामा पढ्दादेखि नै उनले भोजन गर्न छोडेको बताउँछिन् । सानोमा पनि उनी खानाको ठाउँमा चिया र ब्रेड लिन्थिन् ।